Madaxweynaha Galmudug oo Dowladda ku eedeyay in ay gacan bidixeysay Galmudug – Banaadir Times
Madaxweynaha Galmudug oo Dowladda ku eedeyay in ay gacan bidixeysay Galmudug
By banaadir 28th August 2018 174 No comment
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Ducaalle geelle Xaaf oo shalay dib ugu laabtay Magaalada Dhuusamareeb ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in ay gacan bidixeysay Gargaarkii Beesha caalamka iyo mucaawinada ay dowladda dhexe ka sugayeen.
“Dowlada Federalka aad iyo aad ayay noo gacan bidxeysay mucaawino kama hayno dhaqaale kama hayno aan isku tashano wax aan sugno beesha caalamka dowladaa dhexda u joogto, noomana gacan furno.”ayuu yiri Axmed Ducaale isagoo ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Galmudug.
Xaaf wuxuu intaa ku daray in Galmudug aysan dowladda dhexe ka helin adeegyadii dowladnimo ay u baahnaayeen shacabka Galmudug.
Dhinaca kale Xaaf wuxuu ka hadlay khilaafka maamulkiisa dhowr jeer hareeyay wuxuuna sheegay in Madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ay heshiis ku kala saxiixdeen Magalada Muqdisho 13kii Bishii hore laakin heshiiskaas kadib uu qorshuhu ahaa in ay soo wada aadaan Dhuusamareeb balse aysan suurtagelin.
“Runtii markii aan ka soo laabtay Shirkii Biljamka waxa uu qorshuhu ahaa aniga iyo Madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiyaha Baarlamaanka inaan dhuusamareeb tagno laakin weey suurtageli weysay,sababta ay u suurtageli weysay runtii waa waxyaabo iska jira laakin waa laga guuleysan doona ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Sawirro: Dowladda Mareykanka oo Tababar usoo Xirtay Ciidamada Danab Ee Gaarka u Tababaran
Urur Goboleedka IGAD oo ku baaqay in dib loogu laabto wada-hadallada Afisiyooni
By banaadir 21st April 2021